Mpitantana ny CUA:MPAMBOTRY VAHOAKA -
AccueilRaharaham-pirenenaMpitantana ny CUA:MPAMBOTRY VAHOAKA
03/12/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mponina Antananarivo niisa 3400 no namaly ny antson’ny mpitantana ny kaominina Antananarivo-Renivohitra tamin’ny fampidirana tao anatin’ny ara-dalàna ireo olona efa nanao trano nefa tsy naka alalana tany amin’ny kaomina. Raha ny fanentanana nataon’ny tompon’andraikitry ny kaominia tamin’ny volana Oktobra, dia hamoraina ny fikarakarana ny antotan-taratasin’ireo olona tonga manoloana ny lapan’ny tanàna nandritra ny hetsika notanterahina nandritra ny 15 andro. Taorian’izay, dia mbola nitarina ilay fe-potoana ka izay no nahazoana io antotan’isa nahatratra 3400 io. Nandritra ny hetsika, dia nampandoavina vola 2 Hetsy ariary avokoa ireo olona ireo. Natao avokoa ny resaka rehetra nahafahana naka izay roa hetsy ariary ho saran’ny fikarakarana taratasy io. Roboka nandoa noho izany ireo olona, satria efa leo ny miafina ireo polisy monisipaly amin’ny tsy fananan’izy ireo fahazoan-dalana nanao trano tamin’ny fotoana nananganany izany trano fonenany izany.
Taorian’ny fandoavana ilay lelavola, dia efa samy nandry saina ireto tompon-trano ireto. Ny antony dia ho tafiditra ao anatin’ny ara-dalàna amin’izay ilay trano natsangany teny rehetra teny. Ny mifanohitra amin’izay anefa no mitranga raha ny nambaran’ny mpanolotsaina sasany eo anivon’ny kaominina Antananarivo-renivohitra. Mbola tsy ny saran’ilay fikarakarana ny antotan-taratasy mantsy ny vola 2 hetsy Ariary nasaina naloan’ireto tompon-trano ireto, fa sara-pandraisana ny antotan-taratasiny fotsiny ihany. Aorian’ny fanadihadiana atao kosa vao fantatra na azo ampidirina ho isan’ny ara-dalàna izy ireny na tsia. Tsy maintsy atao mifanaraka amin’ny drafitry ny tanàna mantsy ireny fananganana trano ireny. Tsy azo ekena mihitsy araka izany raha toa tsy tafiditra ao anatin’izany drafitra izany ilay trano nahorina tsy nanara-dalàna. Izany hoe tsy maintsy harodana ihany na ho ela na ho haingana. Mbola vola hafa ihany koa no alohan’ireo tompon-trano nanorina tao anatin’ilay fanajana ny firafitry ny tanàna raha ny nambaran’ireo mpanolotsaina hatrany. Fehiny, fitadiavam-bola sy famitaham-bahoaka fotsiny ihany no nataon’ny mpitantana ny kaominina Antananarivo -Renivohitra nandritra iny hetsika notanterahina tamin’ny volana Oktobra iny.